W.arimaha gudaha Puntland Booqday Xarumaha Dawladda Badhan - SomaliNet Forums
Postby FBISOMALIA » Sun Mar 06, 2011 3:40 pm
Wasiirka arimaha gudaha iyo Dawladdaha Hoose ee Dawladda Puntland oo maalmahaan isaga iyo wefdi kale booqasho ku jooga gobolka Sanaag ayaa booqasho ku tegay xarumaha Dawladda ee degmada Baran.
Gen.Cabdullaahi Axmed Jaamac (Ilkajiir) iyo wefdi uu hogaaminaayo ayaa kormeer ku sameeyey Xerada Ciidamada Daraawiishta gobolka Sanaag,Taliska qaybta ee gobolka iyo xarumo kale.
Wuxuu ugu horeyn warbixin xerada Daraawiishta Ciidamada Puntland ee gobolka Sanaag ka dhageystay Taliyaha Ciidanka Daraawiishta ee gobolka Sanaag Cabdullaahi Cumar Canshuur,wuxuuna sheegay in dib u habeyn loo baahan yahay in lagu sameeyo Ciidanka halkaas ku sugan.
Sidoo kale wuxuu xarunta Taliska qaybta kula kulmay Saraakiisha Booliska oo ka warbixiyey xaaladdaha Ciidamada Booliska iyo baahiyaha ay qabaan xilligaan in ay helaan.
Wasiirka arimaha gudaha ayaa ugu dambeyntii yimid xarunta gobolka halkaas uu kulan kula qaatay Gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Siciid Nuur ”Dabayl”.
Gudoomiyaha ayaa warbixin dheer oo ku saabsan xaaladda gobolka siiyey Wasiirka,wuxuuna ka warbixiyey dhanka nabadgalyada iyo abaaraha ka taagan dhamaan degmooyinka gobolka.
Waa booqashadii u horeysay uu Wasiirku ku tego xarumaha Dawladda ee degmada Baran tan iyo markii uu dhowaan halkaas gaarey isaga iyo wefdi Wasiiro ah uu hogaaminaayo.
Re: W.arimaha gudaha Puntland Booqday Xarumaha Dawladda Badh
Postby damu » Mon Mar 07, 2011 3:01 pm
Badhan-(MMedia)- Wafdigii uu Hogaaminayay wasiirka arimaha Gudaha puntland C/laahi Axmed jama ilka jiir ayaa maanta Booqday Xarumaha Caafimaadka sida dhakhtarka wayn ee magalaada badhan iyo MCH ka magalada waxaana ay boqashadaasi iyo kormaaerkasiba waxaa ku wehelinayay dhakhtarka magaalada Badhan Dr Ciise Axmed Taajir iyo xubnaha dhakhtarka.
waxa uu booqday wasiirka iyo wafdigii gabi ahaanba dhakhtarka isagoo hadba meel booqnayay waxaan uu soo wada maray bukaankii jiifay dhakhtarka waxaana uu gabi ahaanba waraysatay o xaladooda wax ka waydiiyay dadka bukaanka ah ee goobta jiifay .
kadib waxaa uu booqday goobaha looga shaqeeyo cusbutaalka waxaan uu galay qol qol isagoo sheegay in uu cisbitaalku u baahan yahay wax qabad taasina ay tahay mid idinka laydinka baahan yahay hadii aad tihiin maamulka cisbtaalka waxaan uu sheegay in dadka bukaanka ee yaala meesha ay yihiin dad u baahan dawayn .
wasiirku waxa uu intaasi ku daray in dhaktarkani yahay mid laf dhabar u ah bulshada Reer Sanaag loona baahan yahay in laga Faaiidaysto waxa kaloo oo Wasiirku ugu Baaqay dhamaan qurba joogta debadahu inay gacan ka gaystaan Cisbitaalka oo ah mid mar walba u baahan in la joogteeyo sidii wax looga gaysan lahaa
Hadaba waftigan oo ku sugan hada Magaalada Badhan ayaa u kuu gelaya dhamaan Xarumaha kala duwan ee Degmada intaa lagu dhawaaqin Golaha Deegaanka ee degmada si marka la doorto golaha deegaanka loogu wareejiyo howlaha u baahan inay wax ka qabtaan
Maakhir Media Badhan
Wasiirka Arimaha Gudaha Puntland Oo Gaaray Gobolka Sanaag
by FBISOMALIA » Sat Mar 05, 2011 4:49 am » in Politics - Puntland
Sat Mar 05, 2011 4:51 am
Wasiirka Arimaha Gudaha Puntland La Kulmay Saraakil sare QM
by FBISOMALIA » Thu Jan 27, 2011 10:28 am » in Politics - Puntland
Wasiirka Arimaha Gudaha GM Abdi wayel
by dalalos101 » Thu May 14, 2020 1:12 pm » in Provinces - Gedo
Wasiirkii arimaha gudaha oo qarax ku shahiiday
by AhlulbaytSoldier » Fri Jun 10, 2011 12:32 pm » in General - General Discussions
Wasiirka arimaha gudaha ayaa sheegay in rag la qabtay
by abdikarim86 » Wed Dec 07, 2011 4:54 pm » in Politics - Somaliland
who is Abdisamad Wasiirka arimaha gudaha iyo amniga qaranka
by Adali » Tue Jul 17, 2012 5:16 pm » in Provinces - Gedo
Tacsi: Hogaanka Arimaha Gudaha JWXO Cabdi cabdullahi(AUN)
by hanqadh » Tue Jun 21, 2011 3:55 am » in Ogaden - General Discussions
Wasiirka Arimaha Gudaha Somalia oo ka horyimid Saddex Gobol
by THE_TRUTH1 » Tue Jun 24, 2014 10:01 am » in Politics - General Discussions
Wasiirka Arimaha Gudaha Dowlada Somalia Sheekh C/qaadir Cali
by CMkingdom » Wed Jul 08, 2009 2:23 am » in Politics - General Discussions
by CMkingdom View the latest post